Semalt Expert: 5 Mazano Okudzivirira Ma Viruses Pa Android
Android operating system inopa chikamu chikuru chekombiyuta yenyika. Zvisinei, kuzarura kwayo kunotsanangura zvigadziri kuTrans and malware. Vanokanganisa vanogona kushandisa maitiro eAroid vachishandisa downloadableable Apps kuparadzira zvirwere kuvashandisi. Kungofanana nedzimwe nzira dzekombiyuta, vashandisi veIndaneti vanogona kushandisa checks uye zviyero zviripo kuti varinde zvigadzirwa zvavo pamusoro pemishonga inokuvadza.
Mutungamiri Mukuru weVatengi vanobudirira Semalt DIGital Services, Artem Abgarian, inotsanangura matanho mashanu ari nyore ekuchengetedza madivayiri eAroid kubva kumagadzirirwo ane utachiona hwehutachiona - home temperature monitoring via internet.
1. Usambogadzika maitiro ausingazivi
Funga kaviri usati washandisa chero App pane Android device. Kunyange zvazvo mamwe maitiro anobatanidzwa ne email, social media kana pa webusaiti inogona kubatsira zvikuru, kuiswa kweizvizivikanwa-pamusoro pekushanda kunogona kuzarura musikana kune malware uye mavairasi. Mushandisi weIndaneti anofanira kutsvakurudza zvikuru achishandisa maforamu, mablogi, uye vhidhiyo kuitira kuti vaone kukosha uye zvinyorwa zvese pamusoro pemitambo yakagamuchirwa inobva mumitauro yechirangaridzo ye spam uye inowirirana mazano.
2. Isai mapurogiramu kubva pazvinyorwa zvepikicha zvakachengetedza saGoogle Play
Kuita nekutsvaga kushandiswa kwekushandiswa kubva paIndaneti kunowedzera kukwanisa kwekutengesa mavairasi neTrojan kune Android device. Dzimwe nzvimbo yepaIndaneti yakavimbisa kupa mubhadharo wekubhadhara kwemashoko akasununguka kana akafanana akaisvonaka anogona kukonzerwa nekukanda maitiro e-malware-loaded. Muitiro wekushandisa Google Play, Amazon Appstore nezvimwe zvinoremekedzwa zvinoita kuti zvishoma kuderedzwa kune malware uye mavairasi sekutenga zvokudya kubva kune zvivigiro zvekutendwa zvinoderedza kunowedzera dambudziko kubva kune zvinotengeswa zvezvokudya.
3..Tarisa maAroid settings pane "Isa kubva kuNazi Sources"
Nokusingaperi, madivaysi eAroid anoshandiswa kudzivirira kuiswa kwezvidzidzo kubva kune mamwe mabhuku kunze kweGoogle Play. Izvo zvigadzirwa zvinoparidzira mungozi kana mutezo unoshushikana kubva kune chinyorwa chisingazivikanwi ndezvekuisa. Mushandisi anogona kubvumira kuiswa nekusarudzwa muzvigadziri zvechigadzirwa. Izvi zvinobvumira mutengi kuti aite chekuongorora chekutenderera kweApp asati agadziriswa kuti ave nechokwadi chekuchengetedzwa kwemarware uye mavairasi.
Kuchengetedza kuchengeteka kweIroid device, usambochinja maitiro ekugadzirisa kuti uvhare mapurogiramu asina hanya kunze kwekuti chinyorwa chichengeteka.
4. Verenga mvumo inodaidzwa ne app
Kubudiswa kushandiswa pane imwe device yeAroid vanoda mvumo isati yaiswa. Chibvumirano chinopesana zvichienderana nekushandiswa kwepurogiramu iri muchigadzirwa. Vanogona kukumbira mvumo yekuwana mahofisi ekufonera, mavhesi uye e-mail kutaurirana kana kamera, GPS, uye internet nokuda kwechinangwa chakagadzirirwa. mapurogiramu anokumbira mvumo yekuita zvinhu zvinoshusha angasvibisa kuchengetedzwa kwemushandisi. Iyo mapurogiramu anogona kuisa mavairasi neTrojans kuti aite zvinokuvadza zvakanyanya.
5. Isa virus ye scanner kuti uone kuchengeteka
Mubvunzo wekuti iwe ungashandisa sei maitiro akawanda antivirus anowanika paIndaneti kuongorora nekuchengetedza maikirwe kubva kumavirusi uye malware isingabvumirwi. Zvikumbiro kubva kuGoogle store zvakachengetedzwa zvakakomba kuchengetedzwa kwekutarisira kuti vashandisi vadzivirire kubva kune Trojan uye malware. Zvisinei, mamwe maitiro anotengwa kubva kuGoogle Play angave ane mavhiri anokuvadza.
Kuiswa kwekuchengetedza zvikwereti nezvimwe zvinhu zvakadai sokukwanisa kuwana uye kuchenesa foni yakarasika kunze kwekuchengetedzwa kubva kune malware neTrojan kunogona kubatsira.
Kuchengetedzwa kubva kumavirusi hazvioma. Ingove wakarinda.